ခရိုင်အဝန်း Input ၏ 2019 KSD ပြည်နယ် Survey
ခရိုင်အဝန်း Input ၏ 2019 KSD ပြည်နယ်
ပြီးခဲ့သည့်လကကျော်ကျွန်ုပ်တို့၏ခရိုင်ပြည်နယ်တွေအကြောင်းနှစ်ဆယ်အချက်အလက်များနှင့်အရေးကြီးသော updates များကို shared ပါပြီ။ ယခုအသစ်ဆန်းသစ်မရှိ-ကုန်ကျစရိတ်ဖြေရှင်းချက်အမျိုးမျိုးသောပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အဆင်ပြေဘာသာပြန်ထားသောနှင့်ဝင်ရောက်နိုင်မယ့်ဒစ်ဂျစ်တယ် format နဲ့ကြီးမားတဲ့ပရိသတ်ကိုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိုင်နှင့် ပတ်သက်. အရေးကြီးသော updates များကိုပေးနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုသင်ကြားရေးနှင့်သင်ယူမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမာခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအာရုံစိုက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့အသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုသင်ယူနှင့်သင်ယခု input ကိုပေးနှင့်ဤသော့ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အစပျိုးပေါ်မှာငါတို့ခရိုင်အကြံပေးဖို့အခွင့်အလမ်းကိုယူမညျဖွစျကွောငျးရှိသည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဦးတစ်အသိုင်းအဝိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏မှုအရာကိုမသိဘဲကျွန်တော်တို့ကိုအတူတကွရှေ့ဆက်ကူညီပေးပါမည်။
* 1. ခရိုင်၏အချက်အလက်များ၏ပြည်နယ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်, ငါ KSD ဖော်ပြထားမဟာဗျူဟာမြောက်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်အောင်ဦးတည်တိုးတက်မှုအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခံစားရတယ်။
* 2. ကျနော်တို့ခရိုင်အသုံးစရိတ်အဘို့သင့်ဦးစားပေးများတွင်စိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးသင် Kent ကျောင်းခရိုင်များအတွက်ဦးစားပေးဖြစ်သင့်ခံစားရကြောင်းသုံးဘတ်ဂျက်ဒေသများရွေးချယ်ပါ။
ဤသည် KSD မရွေးချယ်မည်သည့်ဒေသများထံမှငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုဖယ်ရှားသို့မဟုတ်ကိုအလွန်ကိုရွေးချယ်သောသူတို့ကိုထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်မဆိုလိုပါ။ KSD သည့် 2019-2020 ဘတ်ဂျက်ဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်ဤအချက်အလက်စကားဝိုင်းမှကြွယ်ဝစေပါလိမ့်မယ်။
လူမှုရေးစိတ်ခံစားမှုသင်ယူအရင်းအမြစ်များ (ပညာပေး, စာသင်ခန်း, ပစ္စည်းများ)
ဝန်ထမ်းများနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက် equity သင်တန်း
* 3. ကျွန်မအကြောင်းပိုမိုသိလို ...
ဝန်ထမ်းများအတွက် Professional ကသင်ယူမှုအခွင့်အလမ်း
KSD ရဲ့ရှယ်ယာအာရုံစိုက် - န်ထမ်းများအတွက်ရေရှည်အစီအစဉ်ကဘာလဲ? ကျောင်းသားများကို? ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ?
တစ်ဦး KSD ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာရန်မည်သို့
* 4. KSD ငါ့ကွန်နက်ရှင်အကောင်းဆုံး (တဦးတည်းကိုရွေးပါ) အဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်:
မိဘ / မိသားစုဝင်
* 5. သင်တစ်ဦးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် KSD အသိုင်းအဝိုင်းကော်မတီကအပေါ်တာဝန်ထမ်းဆောင်အတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်, သင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုပေးပါ။
* 6. သငျသညျဘာသာပြန်ချက်၏အရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးခံစားရပုံကိုဘယ်လောက်ရှိသလဲပေးပါ။
ဘာသာပြန် ok ရှိ၏ ငါစစ်တမ်းအချို့ကိုနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။